Momba anay - Ningbo Chuanshanjia Electrical And Mechanical Co., Ltd.
—— CSJ dia mpitarika amin'ny famolavolana sy ny famokarana andriamby manokana sy ny rafitra MRI.
Taona maro niainana MRI
Indostrian'ny famonosana andriamby amin'ny taona
NingBo ChuanShanJia Electrical and Mechanical Co., Ltd. dia orinasa tsy miankina iray izay nanangona traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny teknolojika resonansa andriamby nokleary ary manolo-tena hampiroborobo ny fampiharana ny resonance magnétika nokleary.
Ny CSJ dia manao fikarohana indrindra momba ny fampiharana ny haitao maharitra, ny electromagnetic ary ny superconducting teknolojia. Ny vokariny dia manarona andriamby sy coil imaging magnetika (MRI), rafitra fandinihana angovo nokleary (NMR), rafitra resonansa elektronika paramagnetika (EPR), Diagnostika MRI amin'ny veterinera sy rafitra fitsaboana, rafitra fanaraha-maso hemorrhage cerebral ambany indrindra, rafitra MRI finday, Ny fidirana an-tsehatry ny MRI dia ny aretina sy ny rafitra fitsaboana ary ny hafanan'ny radio manara-penitra, ny mikraoba, ny fitaovana fitsaboana plasma, ny vahaolana miaro amin'ny fidiran'ny tranokala MRI, sns.
Nandritra ny taona maro, CSJ dia nahavita fampandrosoana haingana noho ny tanjaka ara-teknika matanjaka, ny vokatra matotra avo lenta ary ny rafitra serivisy tonga lafatra. Ireo mari-pamantarana ara-teknika sy ny tena vokatr'ireo vokatra ireo dia nohamafisina tanteraka ary niraisan'ny ankamaroan'ny mpampiasa fampiasa.
Ningbo ChuanShanJia dia miompana amin'ny tontolo izao, manome fanaingoana manokana ny singa sy ny rafitra resonance andriamby, manome vokatra sy serivisy avo lenta ho an'ny orinasa sy andrim-pikarohana siantifika amin'ny sehatry ny fitsaboana, fambolena, sakafo, fitaovana polymer, solika, semiconductor ary siansa fiainana .
Amin'ny ho avy, CSJ dia hanohy hanome ny tombony azy manokana, hanaraka hatrany ny foto-kevitry ny "mitarika teknolojia, manompo ny tsena, mitsabo ny olona amin'ny fahamarinana, ary mikatsaka ny tonga lafatra" sy ny filozofia orinasa ny "vokatra toy ny olona", ary manohy manatanteraka fanavaozana ara-teknolojia, fanavaozana ny fitaovana, fanavaozana ny serivisy ary fanavaozana ny fomba fitantanana. Mampivoatra hatrany ireo vokatra mahomby kokoa amin'ny alàlan'ny fanavaozana mba hamaly ny filan'ny fampandrosoana amin'ny ho avy, ary hanomezana haingana ny mpanjifa vokatra avo lenta sy lafo vidy no tanjonay tsy manam-petra.
CSJ dia hihaona amin'ny filan'ny mpanjifa manokana sy avo lenta amin'ny alàlan'ny fitantanana henjana, teknolojia mandroso, kalitao azo antoka ary serivisy tsara aorian'ny fivarotana.